Ndi 2015 Ahịa Ahịa Strategy Na-ekpuchi Tredị Ndị A? | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 28, 2015 Wenezdee, Jenụwarị 28, 2015 Douglas Karr
content Marketing na-eduzi mkpọ na usoro ire ahịa dijitalụ maka 2015, nke Big Data, Email, Marketing Automation na Mobile sochiri. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ihe kacha mkpa na-egosi na ụlọ ọrụ anyị ebe anyị na-arị elu Big Data oru ngo anyị mepụtara maka a isi online nkwusa. Big Data na-aghọ ihe dị mkpa naanị n'ihi oke na ọsọ nke data anyị na-agbakọ ma na-enyocha iji buo amụma ma kọọ arụmọrụ na mbọ ahịa ahịa ọdịnaya.
Azụmaahịa sitere n'ahịa niile na vetikal na-eme atụmatụ doro anya maka ịkwalite mbọ azụmaahịa ọdịnaya ha, dị ka ndị na-ere ahịa B2B na-abawanye mmefu ego nke ọdịnaya ha na ịmepụta ọdịnaya karịa ihe ha mere na mbụ. Ọbụna ụdị ndị bụ isi na-esonye n'agha ahụ, ihe dịka 69% na-arịwanye elu na mmepụta ọdịnaya ha ga-aga n'ihu na 2015. Jomer Gregorio, CJG Digital Marketing
CJG choputara uzo ahia ahia nke 8 nke juru otutu afo a:
Ahịa ọdịnaya ga-abụ karịa ezubere iche na nke onwe.
Ahịa ọdịnaya ga-eji ndị ọzọ akwụ ụgwọ.
Ahịa ọdịnaya ga-eji ndị ọzọ akụrụngwa ahịa.
Ahịa ọdịnaya ga-eji ndị ọzọ ọkachamara edemede.
Ahịa ọdịnaya ga-elekwasị anya na nkesa.
Ọdịnaya ọdịnaya ga-alụ elekọta mmadụ media ahịa.
Ọdịnaya Ahịa ga-enwe ọganihu ahịa efu.
Ọdịnaya Ahịa ga-aga supernova site na ịkọ akụkọ ọhụụ.
Tags: 2015content Marketingusoro ahịa ọdịnaya
Feb 4, 2015 n’elekere 6:09 nke abali
Nke a bụ ezigbo nkọwa dị mma banyere usoro azụmaahịa nke oge a. Echere m na usoro atụmatụ azụmaahịa asatọ a na-enyere anyị aka ma ugbu a-ụbọchị ndị a niile kachasị mkpa maka ahịa ọ bụla. Ọzọkwa Info-graphic representation enyerela nke ọma. Daalụ maka ezigbo isiokwu a!
Obi abụọ adịghị ya na ọdịnaya ahụ bụ mmanụ nke weebụsaịtị gị wee nwee ike ijide n'aka na iji mmanụ dị mma iji rụọ ọrụ nke ọma na webụsaịtị. Yiri nke a, lee ị kọwarala akụkụ niile nke azụmaahịa ọdịnaya yana usoro ọhụụ.